nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4)
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #851
Ndewo, kemgbe ogologo oge ebe m nọ ebe a. Enwere m nsogbu abụọ. Akpa, m gbanwere kọmputa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụfọdụ n'ime ụgbọ elu ndị kachasị mma na-ebudata na akpụkpọ anụ niile. Enweghị ike ịkwado n'enweghị ngwá ọrụ Nke abụọ bụ na enweghi m ike ịnweta igwe ma ọ bụ abụọ na-arụ ọrụ, ma tinye 3rd ma ọ bụ 3rd. na 4th, ọ bụ naanị ọrụ abụọ.Ọ na-amasị m iji ụgbọ elu Dash 7 na-efe efe, mana ọ bụ naanị ụgbọ elu aka ekpe na-agba ọsọ.
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #852
Anyị chọrọ ọtụtụ ozi ndị ọzọ. Kedu ụgbọ elu, nke FSX ụdị wdg… Ndi ugbo elu nọ na ajụjụ a nwere akwụkwọ ntuziaka, ị soro ya na ndị ọzọ ... Nke ahụ bụ naanị ụzọ iji nyere aka.
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #855
Iche dị ka a ga-asị na ị kwụsịrị ihe m mere n'oge gara aga. Ana m eme ya niile site n'akwụkwọ na / ma ọ bụ "ịgụ-m". N'ihe banyere ụgbọ elu ọ bụla, echere m na m kwuru, ụgbọelu ọ bụla nwere ihe karịrị 2 engines. Enwere m ike ịmepụta ikikere ụgbọ elu X-56 na otu ụzọ, ma ọzọ. Ngbanwe ọ bụla na-emetụta ihe niile engines ndị ọzọ ma ọ bụ ụgbọelu niile kwesịrị ekwesị ka ha nọrọ na-abaghị uru mgbe ndị ọzọ na-atụgharị. Ana m eji mbipụta sfx steam. M kpọtụrụ gị n'ihi na enwere m nsogbu ogologo oge gara aga ma ị kwadoro m na nke ahụ. M rịọ mgbaghara maka iwepụta oge gị na ọnọdụ a, na echere na mmadụ nwere nsogbu yiri ya ma gwọọ ya. Enweghị ihe ọ bụla dị na FAQ gị.
M rịọ mgbaghara ma chee, PAYSON
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #869
Aga m agbalị ebe ọzọ. Daalụ.
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #870
Whooooa !!! Achọtara m ụzọ ziri ezi iji dozie mgbanwe maka iji 1 mepụta 6 engines. Ọ dị nnọọ mfe. Daalụ maka enyemaka :-(
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #872
ikere òkè na ndị ọzọ nwere nsogbu a?
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #873
Achọrọ m ozi ndị ọzọ. Kedu ụgbọ elu, nke FSX ụdị wdg… Ndi ụgbọ elu a nọ na ajụjụ ahụ nwere akwụkwọ ntuziaka, ị soro ya na ndị ọzọ ... Nke ahụ bụ naanị ụzọ iji nyere aka.OS, sistemụ ụgbọ elu, wdg.
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #874
N'ezie, ihe omuma ahu nile adighi mkpa. Onye ọ bụla na-eji X-55 ma ọ bụ X-56 Saitek Advanced flight control system ma na-enwe njedebe nke 1 & 2 engine ike, achọtala m ihe m chere bụ ọgwụgwọ. Aga m ezitela nke a, ma ọ na-ewe oge iji megharịa nke a mee 20 ugboro iji gosi m na ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. Nanị mepee "ntọala", gaa ka ịchọta ya. Wepụ ntọala niile, Mgbe nkwụsịtụ ahụ na-apụ kpamkpam, na ịpị onwe ya nọ n'ọnọdụ na-abaghị uru (jide n'aka na ị ga-ahapụ nkwụchi mkpọchi ya n'ọnọdụ mbụ), mee ka ọ gbasaa n'ụzọ niile, meghee anya, azụ iji meghee emepe, wee laghachi na-abaghị uru, na-edozi dị ka ọ dị na mbụ, na-emechi ya, gaa na 4 engine engine gị kachasị mma ma nye ya nyocha. Olileanya na ọ na-arụ ọrụ maka gị dị ka ez dịka o meere m.
nsogbu na engines (#3, ma ọ bụ 3 & 4) 2 afọ 6 ọnwa gara aga #875
Oh, e nwere otu agha nke ụgbọ mmiri WWII na-apụta ma na-apụ n'anya n'ụsọ oké osimiri nke Australia (YBBN).
Oge ike page: 0.334 sekọnd